Na mgbakwunye na P40, Huawei ewebatala Watch GT 2e, onye nnyemaka Celia, Huawei Video na ndị ọzọ | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Ngwaọrụ yi, smartwatch
Naanị ihe karịrị otu ọnwa gara aga, Huawei kwupụtara na March 26 ọ ga-eweta na Europe na eze, ọhụrụ P40 nso a nso esịnede 3 ụdị na na anyị ugbua tụnyere na Akụkọ a ha na ha nhata na S20 nso nke o gosipụtara na February gara aga.
Ma n'oge ihe omume a, ọ bụghị naanị nwere Huawei P40 n'ime ụdị atọ ya, 4 ọ bụrụ na anyị agụọ ụdị Lite nke kụrụ n'ahịa izu ole na ole gara aga, dị ka ụlọ ọrụ Eshia gosipụtara smartwatch ọhụrụ ahụ Lelee GT 2e, na mgbakwunye na nke onye inyeaka nke e mere baptizim dika Celia tinyere ndi ozo.
1.1 Huawei Watch GT 2e nkọwa
2 Huawei VIP Ọrụ
3 Huawei Video, Huawei si gụgharia ọrụ
4 Celia, onye enyemaka nke Huawei
Ofwa nke smartwatch na-aga n'ihu na-eto kwa afọ, ma ugbu a ọ ghọọla isi mmalite dị mkpa nke ego maka ndị nrụpụta na-aga n'ihu ịkụ nzọ n'ụdị ngwaọrụ a na ebe anyị ahụghị ndị ọ bụla Wear OS na-achịkwa, Google sistemụ nrụọrụ.
Google enwetụbeghị ịhụnanya pụrụ iche maka sistemụ arụmọrụ ya maka mgbakwunye na ịnye usoro mmachi nke ndị nrụpụta enweghị ike ịgagharị ma ọ bụrụ na ha chọrọ iji ya. Nke a mere ka ndị nrụpụta jiri sistemụ arụmọrụ nke aka ha, sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ arụ ọrụ yana obere oriri batrị, otu n'ime nsogbu ndị bụ isi nke smartwatches.
Nkwenye Huawei na ụwa nke smartwatches na-aga n'ihu nomenclature ọ na-eji ruo ugbu a, a na-akpọ ya Huawei Watch GT 2e. Na Ihe kachasị mma nke ọdụ a bụ nnwere onwe, nnwere onwe nke, dị ka onye nrụpụta si kwuo, ruru izu 2. Na mgbakwunye, ọ bụ ihe dị n'ime mmiri ruo mita ise, na-enye nkwado maka ihe karịrị egwuregwu 5 ma na-enye anyị ụdị egwuregwu.
Huawei Watch GT 2e nkọwa
Ihuenyo 1.39-anụ ọhịa AMOLED
Nhazi Kirin A1
Nchekwa 4 GB nke nchekwa
Njikọ Bluteooth 5.1 GPS Wi-Fi
Usoro njikwa Lite OS
Sensọ Accelerometer gyroscope ihe otiti obi ihe mmetụta ìhè gburugburu barometer na magnetometer
Nguzogide Submersible ruo 50 mita - 5 igwe ndọrọ ego
Mmekọrịta iOS na gam akporo
Batrị Ụbọchị 14
Akụkụ 53 × 46.8 × 10.8 mm
Ibu ibu 43 grams
Okwu ahụ bụ nke igwe anaghị agba nchara na eriri na-ike n'ime ya, ya mere anyị enweghị ike dochie ya na ụdị ndị ọzọ dị ka a ga - asị na anyị na - enye ndị nrụpụta ndị ọzọ dịka Apple na Samsung. Nanị nhọrọ maka Watch GT 2e iji dabaa mmasị anyị bụ ịzụta ya na agba anyị masịrị (ojii, ọbara ọbara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ). The straps na-egosi anyị a imewe yiri nke anyị nwere ike ịhụ na Nike nso nke Apple Watch, na oghere n'ime ya na ha na-ewetara anyị a nko na nkechi.
Ọ bụrụ na anyị bu n'obi iji Huawei Watch GT 2e kọwaa ọrụ egwuregwu anyị n'èzí na GPS, a na-ebelata ikike ịchị ruo awa iri atọ, obodo kwụụrụ nke ụdị ndị ọzọ fọdụrụ ga-akacha amasị ịnye mgbe ha jiri GPS jikọtara ọnụ.
Elekere na-achọpụta ọrụ anyị na-arụ, ma ọ dịkarịa ala ihe omume ndị a na-ahụkarị, ọrụ dị mma maka ndị na-echefu mgbe niile na a na-eji smartwatch maka ihe karịrị ịhụ oge na ọkwa WhatsApp. Na mgbakwunye na ihe mmetụta nke mkpụrụ obi, ọ na-agụnye ihe mmetụta nke na-ahụ maka ịlele ogo nke oxygen n'ime ọbara.
Huawei Watch GT 2e, ga-aga ahịa maka euro 179, ma ọ bụ ezie na ọ nweghị ụbọchị a ga-ewepụta ya, o yikarịrị ka ọ ga-eme ya na ọhụrụ Huawei P40 na mbido Eprel 2020.
Huawei VIP Ọrụ
Google na enye anyi ohere nchekwa 15 GB na enweghi nchekwa na igwe ojii maka foto na onyonyo anyi site na Foto Google. Site na ijikọ ọrụ Google, Huawei gosipụtara ya nwere ọrụ nchekwa igwe ojii akpọ Huawei VIP Service, ọrụ na-enye anyị ohere site na Huawei ID, iji nwee nkwado ndabere na foto anyị, vidiyo, ngwa, ntọala ekwentị ...
N'efu, anyị nwere n'aka anyị 5GB nke nchekwa nchekwa gbakwunye ọzọ 50 GB n'efu maka ọnwa 12 sochirinụ.
Huawei Video, Huawei si gụgharia ọrụ
Dika anyi enweghi oru Google, obu ezie na apuru itinye ha ma oburu na anyi acho intaneti, ulo oru Asia nyere anyi aka ya vidiyo vidiyo a na-akpọ Huawei Video, a ikpo okwu na maka 4,99 euro kwa ọnwa, na-enye anyị nnweta ma usoro na ihe nkiri, ma mba ofesi, European na Spanish.
Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ihe nkiri ọhụụ, ihe nkiri anyị nwere ike mgbazinye maka awa 48 iji nwee ọ enjoyụ na ama ma ọ bụ mbadamba anyị, yana n'ọdịnihu, yana na ngwaọrụ ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịnwale Huawei Video n'efu maka ọnwa abụọ. Iji nweta ọrụ a, anyị chọrọ ngwaọrụ Huawei / Honor na EMUI 5.x ma ọ bụ karịa, yana edebanye aha anyị na Spain ma ọ bụ Italytali.
Celia, onye enyemaka nke Huawei
Onye enyemaka ọhụrụ nke na-akụ ahịa, na-eme ya n'aka Huawei ma na-eme ya iji nweta enweghị ọrụ Google. Aha ya, Celia, nwere olu nwanyị na na-enye anyị otu ọrụ ahụ na anyị nwere ike ịchọta ugbu a na ndị ọzọ na-enyere aka dịka Siri, Alexa, Bixby ma ọ bụ Google Assistant.
Ọ bụghị naanị na ọ na-enye anyị ohere ịtọ mkpu, lelee usoro ma ọ bụ zipu ozi, mana ọ na-enye anyị ohere ịnweta egwu kachasị amasị anyị, jikwaa ya playback, rụọ ọrụ na deactivate ụdịdị na ama anyị, kpọọ usoro ọchị, sụgharịa ụlọ oriri na ọ restaurantụ menu, were a selfie ...
Maka ndị niile na-eche banyere nchekwa na nzuzo gị, Huawei na-echebara nke a echiche ma kwuo na a na-echekwa njirimara olu na ngwaọrụ, dị ka iPhones, a gaghị eziga ya igwe ojii. Na mgbakwunye, ọ na-akwado European GPDR.
Celia na-abịa n'aka Huawei P40, dị na Spanish, Bekee na French ma dị maka ndị ọrụ na Spain, Chile, Mexico, Colombia, United Kingdom na France.
Banyere olu nwanyị, o yighị ka n'ime nhọrọ ndị onye inyeaka nyere, anyị ga-enwe nhọrọ nke gbanwee olu maka nwoke, karịa ihe ọ bụla n'ihi na Celia bụ aha nwanyị (ma ọ bụ ọ bụrụ na a kpọrọ ya Manolo) Alexa, Siri ma ọ bụ Bixby bụ aha na-anọpụ iche, n'ihi ya, anyị nwere ike ịtọ okike anyị chọrọ site na ịmepụta olu nwoke ma ọ bụ nwanyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwaọrụ yi » Na mgbakwunye na P40, Huawei ewebatala Watch GT 2e, onye inyeaka Celia, Huawei Video na ndị ọzọ.
Ebe nrụọrụ kachasị mma iji budata akwụkwọ n'efu